Myanmar Net | မြန်မာနက် ®
မြန်မာတို့ရဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် အိမ်ရာ ©
Welcome to Myanmar Net. မြန်မာနက် ဆိုတာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက မြန်မာတွေ အားလုံးအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဂေဟာ (သို့) ဒစ်ဂျစ်တယ်အိမ်လေး တစ်ခုပါပဲ။ www.မြန်မာ.net လို့ ခေါ်လဲ ရတယ်။ www.shwe.net လို့ ခေါ်လဲ ရပါတယ်။ ခေတ်သုံး ဘမ်းစကားနဲ့ "ရွှေ" လို့ခေါ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အားလုံးအတွက် www.shwe.net ဆိုတာလေးကလည်း မှတ်မိရလွယ်တဲ့ လိပ်စာလေးပါ။ မြန်မာတွေအတွက် အသုံးဝင်တာ လိုအပ်တတ်တာလေးတွေ အကုန်ရှိနေတဲ့ နေရာပါ။ နေ့တိုင်း အမြဲရှိနေလို့ရအောင် browser မှာ default page လုပ်ထားလိုက်လေ :)
ကတော့ ဘာဘဲရှာရှာ အသုံးအဝင်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကို မွှေနှောက်ပြီး သုံးတတ်တဲ့လူက မသုံးတတ်သူကို အမြတ်ထုတ်သွားတာ၊ သိသူဖော်စား မသိသူ ကျော်သွား လုပ်သွားတာတွေ မဖြစ်စေရအောင်ပါ။
လူအတော်များများက ဂိမ်းတွေကို အင်္ဂလိပ်လိုတွေ ဖြစ်နေတဲ့အခါ ကစားချင်ရဲ့သားနဲ့၊ မကစားလိုက်ရတာမျိုး မဖြစ်အောင် ကူညီပေးထားတဲ့ စနစ်ပါ။ မြန်မာလိုတွေ ဖတ်လို့ရအောင် လုပ်လို့ရတာ လုပ်ထားပေးပါတယ်။ ဆက်လက် ကြိုးစားပါ့မယ်ဗျ။
ကမ္ဘာမှာ ဘာဖြစ်နေပြီ၊ သင်ကြိုက်တဲ့ ဆယ်လီက ဘာဖြစ်နေပြီ ဆိုတာတွေ သိရအောင် နာရီတိုင်း အသစ်ဝင်နေတဲ့ သတင်းကဏ္ဍကို ခဏခဏ ဝင်ဖတ်ကြည့်တာ ပျော်စရာပါ။
ရာသီဖွား ဗေဒင် ဟောစာတမ်း
ဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ ဗေဒင်ကို မကြာခဏ ကြည့်တတ်တာ မြန်မာတွေပါ။ ၁၂လ ရာသီ ဗေဒင်ကို အခမဲ့ ဝင်ဖတ်နိုင်ပါပြီ။
အွန်လိုင်းဝယ်ရင် ဈေးပိုတန်တာ ရတတ်တယ်။ ကပ်ရောဂါဘေးကြောင့် အပြင်သွားမရချိန်မှာ လုပ်ငန်းပေါင်း မြောက်မြားစွာအတွက် နဲနဲလောက် လည်ပတ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ချင်သူတွေ ဝယ်လို့ရလို၊ ရောင်းချင်သူတွေလည်း ဝင်ရောင်းဘို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
မြန်မာနက်က အလုပ် ပွဲစား အေဂျင်စီ မဟုတ်ပါ။ အခမဲ့ ကုသိုလ်ဖြစ် အလုပ်ကူရှာပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
ဝယ်မလား? ရောင်းမလား? ငှားစားမလား? ငှားစီးမလား? ဈေးအကောင်းဆုံး ရအောင်ရယ်၊ ဘယ်ကားက ဘယ်ဈေး ပေါက်တယ်ဆိုတာရယ် အလွယ်တကူ သိနိုင်တဲ့နည်းပါ။ အိုင်တီခေတ်ဆိုတော့ အိုင်တီကို အားကိုးသင့်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင် ဗီဒီယို ကြိုက်တာရှာ
မြန်မာ ရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာ ရှိခဲ့သမျှ ရုပ်ရှင် မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေနာမည်နဲ့ သူတို့ပါခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို ပြန်ရှာလို့ ရပါတယ်။ ပြန်ရှာလို့ ရတဲ့ ရုပ်ရှင်+ဗီဒီယို ၆၀,၀၀၀ ကျော် ရှိနေတယ်။
တေးဂီတ သီချင်း ကြိုက်တာရှာ
အဆိုတော် ၁၉၀၀ ကျော်ရဲ့ သီချင်းတွေ ရှိတယ်။ မိတ်ဆွေကြိုက်တဲ့ အဆိုတော် နာမည်နဲ့ သူဆိုခဲ့သမျှ သီချင်းတွေ၊ ပြန်ဆိုတေးတွေကို မူကွဲတွေကို နားထောင်ပြီး အရသာ အမျိုးမျိုးခံစား နားထောင်ချင်သူတွေ ရှိကြပါတယ်။ ပရိတ်သတ် အကြိုက်ပေါ့လေ။
တိပိဋက (သို့) ပိဋကတ် ၃ပုံ
တရားဓမ္မ လေ့လာနာယူလိုသူတွေအတွက် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ကိုယ်တိုင်ဟောကြားခဲ့သမျှတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားတာကို ပိဋကတ် ၃ပုံလို့ ခေါ်ပါတယ်။ နာယူကြည့်ပါ။
စားစရာ ချက်မလား? မှာမလား?
ကိုယ်တိုင် ချက်ချင်သူ ချက်တတ်သူ ဝါသနာအိုးတွေအတွက် ချက်နည်း ပြုတ်နည်း ထောင်နဲ့ချီပြီး ရှိပါတယ်။ အကြော် ၁၂၅ မျိုး၊ အသုပ် ၇၆ မျိုးရှိတယ်။ အသားထဲကဆို ကြက်သားဟင်း ၈၂ မျိုး၊ ဝက်သားဟင်း ၇၁ မျိုးတောင် ရှိတယ်။ မှာမလား? ချက်မလား?
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလား? ဝယ်ရောင်းလုပ်ပြီး အမြတ်ထွက်အောင် လုပ်မလား? ကိုယ်တိုင် ပွဲစားလုပ်မလား? အိမ်ရှင်များအတွက် အခမဲ့ အကျိုးဆောင် ပေးနေပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေဆိုတာ အဲဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ နိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့ နိုင်ငံခြားသားတိုင်း လိုက်နာရမယ့် စည်းကမ်းတွေပါ။ မလိုက်နာရင် ဖမ်းခံရနိုင်တယ်။ တရားစွဲခံရနိုင်တယ်။ ဒါတွေ မဖြစ်အောင် ရှောင်ရန် ဆောင်ရန်တွေ လေ့လာနိုင်တဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသား ၁၂ မျိုးနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအပါအဝင် စုစုပေါင်း ၁၃ ဘာသာနဲ့ ကြည့်လို့ရတဲ့ ထူးထူးခြားခြား အဘိဓာန် ဖြစ်ပါတယ်။ Google Translate ထဲမှာတောင် မပါသေးတဲ့ တိုင်းရင်းသား ဘာသာတွေ ပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဒီတစ်ခုတည်း ရှိပါတယ်။
ဘာပဲ ရောင်းချင်ရောင်းချင်၊ အသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ပတ်ရစ် အဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာမဆို လွယ်လွယ် ပြန်ရောင်းလို့ ရတဲ့ နေရာလေးပါ။ ဖတ်ပြီးသား စာအုပ်အဟောင်းကအစ ပြန်ရောင်းလို့ရတယ်။ ရောင်းကြည့်လေ။
Myanmar Net / မြန်မာနက် က ထုတ်တဲ့ app ကို အခမဲ့ ဒေါင်းလုဒ် ယူထားလိုက်ပါ
အင်ဒရွိုက်ဖုန်းတွေအတွက် လွယ်ကူမြန်ဆန် စေဘို့အတွက် Myanmar Net app ရှိပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲရှာရှာ မြန်မာနက်ရဲ့ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အခမဲ့ အလွယ်တကူ သုံးလို့ရအောင် ရှာလို့ရတာပေါ့။ Developed by Myanmar Net software co. ltd.
Myanmar Net official web sites:
www.မြန်မာ.net | www.shwe.net
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် စွမ်းပကားတွေ တိုးပွားအောင် ကူညီပေးနေတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ digital divide လို့ခေါ်တဲ့ နည်းပညာမဲ့အထီးကျန်မှုတွေ နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် မြန်မာနက် က ပေါင်းကူးပေးနေပါတယ်။
No one should be left behind. Digital divide is huge in Myanmar. When computer science is not taugnt in schools from kindergartenn till high school in Myanmar, average people lags behind in every possible way. And our goal is to help close this gap, by digitally educating and empowering Myanmar people. Come! Join hands. Be part of the next revolution of the Myanmar community!
အခမဲ့ ကားပွဲစား ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ဘို့၊ ဝယ်ဘို့ ငှားဘို့ ဆိုတာတွေကို ရွေးပြီး ရှာရုံပါပဲ။ ဘယ်မြို့မှာ ရောင်းနေတဲ့ကားလို့လဲ ရှာလို့ရပါတယ်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များလည်း ရှိနေပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရှမ်း၊ ရဝမ်၊ အခါ၊ ပါဠိ စတဲ့ ဘာသာစကား ၁၃ မျိုး အဘိဓာန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဘာသာပေါင်းစုံ အဘိဓာန်က အင်တာနက် တစ်ခုလုံးမှာ ဒီမှာ တစ်ခုပဲ ရှိတယ်လို့တော့ ပြောကြပါတယ်။
မြန်မာနက် အင်တာနက် လမ်းညွှန် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ မြန်မာတွေ အားလုံးအတွက် အသုံးအဝင်ဆုံး လမ်းညွှန် ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရဌာနတွေ အားလုံးရဲ့ ဝဗ်ဆိုက်လမ်းညွှန် လည်းပါပါတယ်။
ဟင်းချက်မလား? အော်ဒါမှာလား? မြန်မာနက်မှာ ဟင်းချက်နည်းပေါင်းစုံ အများကြီး ရှိပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားအစားအစာတွေကအစ ထိုင်း၊ ဥရောပ အစားအစာတွေ အထိ အော်ဒါမှာလို့လည်း ရပါတယ်။
ဂိမ်းကစားတဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ မရင်းနှီးရင် ဂိမ်းကို ဘယ်လိုကစားရမလဲဆိုတာ နားမလည်လို့ အခက်အခဲ တွေ့ကြရပါတယ်။ ဒါကို ကူညီနိုင်ဘို့ လုပ်ထားတာပါ။
သင်နဲ့သင့်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ မွေးလ မွေးရက်ပေါ်မူတည်ပြီး လူတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာ၊ စိတ်နေသဘောထား ဟောကိန်း ဗေဒင် ဟောကိန်းများ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ဗေဒင် လုပ်နိုင်ဘို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
အိမ်ခြံမြေဆိုတာ လူတိုင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ နေဘို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာ စီးပွားရေး လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် မပတ်သက်လို့ မရတဲ့ဟာပါ။
အလုပ် ဆိုတာ အရွယ်ရောက်တဲ့ လူတိုင်းအတွက် ဒုတိယဘဝ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်လိုချင်ရင်၊ အလုပ် ပြောင်းချင်ရင် အလုပ်ခေါ်စာတွေ အများကြီးနဲ့ ကူညီဖို့ပါပဲ။
ဥပဒေဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက နိုင်ငံသားတိုင်း၊ နိုင်ငံခြားသားတိုင်း လိုက်နာ ကျင့်သုံးရတဲ့ စည်းကမ်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုက်တာ၊ မကြိုက်တာတွေကတော့ တစ်ပိုင်းစီပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်ဘက်က မခံရအောင် သိထားဘို့တော့ လိုပါတယ်။
အမှန်တော့ news ဆိုတာ (N)orth, (E)ast, (W)est နှင့် (S)outh ဆိုတဲ့ စာလုံး ၄ လုံးကို အတိုကောက် ခေါ်ရာကနေ ဖြစ်လာတဲ့ စာလုံး ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ နေ့စဉ် ရွှေဈေး ဒေါ်လာဈေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အမှန်တော့ ဈေးဝယ်တယ် ဆိုတာ မိသားစုရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းတဲ့ အလုပ်ပါ။ လိုအပ်တဲ့ဟာတွေ အင်တာနက်ထဲကနေ ဈေးဝယ်လို့ မှာလို့ရတဲ့ ခေတ် ရောက်နေပါပြီ။
အင်တာနက်ကြီး တစ်ခုလုံးထဲ ရှာချင်တာ ရှာပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အင်ဂျင် ဆိုတာ လူ့သမိုင်းမှာ တီထွင်နိုင်ခဲ့သမျှ အားလုံးအားလုံးထဲက အစွမ်းထက်ဆုံး ကိရိယာများ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိမိသိချင်တာ ရှာဘို့ ဒီကလင့်ကို နှိပ်ပါ။
မြန်မာ့ သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ခေတ်သစ် ခေတ်ဟောင်း တေးသံရှင် ၁၉၀၀ ကျော်က ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းထောင်ကျော် စုစည်းထားပါတယ်။ သီချင်းစာသားတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
ပိဋကတ် ၃ပုံ ➤
ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့သမျှ အဆုံးအမအားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ပိဋကတ် ၃ပုံကို ပါဠိလိုတင် မဟုတ်ဘဲ မြန်မာလို ဖတ်နိုင်ပါပြီ။
ရုပ်ရှင် ဗီဒီယို ➤
လူကြီးမင်းကို ဖျော်ဖြေဘို့အတွက် မြန်မာဗီဒီယိုနှင့် ရုပ်ရှင်ပေါင်း 66,000 ကို ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ အချို့ရုပ်ရှင်တွေက တစ်ကားလုံး အစ-အဆုံး ကြည့်လို့ရပါတယ်။
မြန်မာနက် ဆော့ဝဲ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
မြန်မာနက် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုများ
Internet Services by Myanmar Net Media Group
မြန်မာနက် မီဒီယာ ခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်း
မြန်မာနက် ဝဗ်ဆိုက် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း
မြန်မာ ခရီးသွား သတင်းမီဒီယာ လုပ်ငန်း
အက်ဒ်မာ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကြော်ငြာလုပ်ငန်း
https://shwe.net | https://မြန်မာ.net
Myanmar Net TV
is an essential soft infrastructure to upgrade the Myanmar digital society to the next level.
Get knowledge and technologies used for fishery operations.
Learn how to improve yields in your farms and plantations.
By watching these videos, you will be able to undertand DOs and DONTs in rice farming.
Farming Beans and Pulses
Farming beans and pulses is often tricky. Here are guides for fertilizers and pesticides too.
မြန်မာနက် ®, Myanmars Net ®, Myanmar Net ®, Shwe Net ® are officially registered well-known trade names and trademarks of မြန်မာနက် ဆော့ဝဲကုမ္ပဏီ လိမိတက် (Myanmars Net Software Co Ltd). Unauthorzied use of our trademarks are strictly warned and prohibited.
မြန်မာနက်တီဗီ ကို အခမဲ့ ယူထားလိုက်ပါ။
Myanmar Net TV မှ တောင်သူဦးကြီးများအတွက် သိမှတ်ဖွယ်ရာတွေ၊ ကျောင်းသား လူငယ်တွေအတွက် ဗဟုသုတ ရစရာတွေ အများကြီး အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ (အင်တာနက် အသုံးပြုခက မြန်မာနက်တီဗီ အစီအစဉ်မှာ မပါဝင်ပါ။ သီးသန့် မိမိဘာသာ ကျခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။)
မှတ်ချက်။ မြန်မာနက်တီဗီ အခမဲ့ ရယူဘို့အတွက် အောက်ကလင့်ကို နှိပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ ယူကျု စာမျက်နှာမှာ Subscribe ဆိုတာလေးကို မြန်မြန်လက်နဲ့ ထိလိုက်ပါ။
© Copyright 1998-2022 All rights reserved by Myanmar Net Media, မြန်မာနက် ဆော့ဝဲ ကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ ရန်ကုန်